घरमा यी बिरुवा राख्नुभयो भने पैसाको बर्षा हुनेछ ! यी हुन् भाग्य सूचक वा पैसा फलाउने बोट – Annapurna Daily
घरमा यी बिरुवा राख्नुभयो भने पैसाको बर्षा हुनेछ ! यी हुन् भाग्य सूचक वा पैसा फलाउने बोट
On Jun 15, 2021 2,049
काठमाडौँ । सामान्यतयाः मानिसहरू कसैलाई पेच पर्नेगरी भन्नुपर्यो भने भन्छन् कि पैसा रूखहरूमा फल्दैन् ? तर यदि हामीले तपाईंलाई रूखहरूमा पैसा फल्छ भन्यौँ भने तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ? वास्तुशास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरू बताइएको छ, जसले घरमा पैसा बढाउन सहयोग गर्छन । हो, शास्त्रमा त्यस्ता रूख र बोटहरूलाई सम्पन्नता र समृद्धिसँग सम्बन्धित छन् भनिएको छ ।
आउनुहोस्, आज हामी तपाईंलाई ५ त्यस्ता रूख र बोटहरू बताउँदैछौं जसले तपाईंको घरमा पैसाको ओईरो लाग्नेछ । मनी प्लान्टका बोटहरू लामो समयदेखि सबैका लागि मनपर्दो बोटका रूपमा देखिएका छन् । यसको दाखको बोट पनि धेरै सुन्दर देखिन्छ । साथसाथै यसले वातावरणलाई शुद्ध पार्ने पनि काम गर्दछ । मनी प्लान्टलाई इग्निस कोणमा राख्न उपयुक्त ठानिन्छ ।यस दिशामा राख्दा यो राम्रो फल्छ र फुल्छ पनि ।
घरमा मनी पलान्टका बिरूवाहरू राख्ने गर्नाले तपाईंको घरमा पैसाको कहिल्लै पनि कमी हुँदैन । तपाईको कुनै पनि कार्य पैसाको अभावका कारण रोक्ने अवस्था आउँदैन ।शमी रूख वस्तुको हिसाबले धेरै विशेष मानिन्छ । शमी रूख शंकरजीको सबैभन्दा प्रिय मानिन्छ । यस्तो विश्वास गरिन्छ कि घरमा शमी रूख रोप्नाले सम्पूर्ण गरिबी हटेर जान्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस: घरमा झगडा हुनुको मुख्य कारण बन्ने गर्दछ यी ५ वास्तु दोष, नगर्नुहोस्…भगवान शिवलाई भूलेर पनि नचढाउनुहोस् यी ५ चिज, मानिन्छ निकै अशुभयो विश्वास गरिन्छ कि प्रत्येक सोमबार शिवलाई शमीको फूल र पातहरू चढाउँदा तपाईंको घरमा खुशी र समृद्धि आउँछ । तपाईं यसलाई पैंसाको रूख पनि भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसले तपाईंको घरमा पैसाको बहार ल्याएर गरिबी हटाउँछ ।
वास्तुशास्त्रमा, मनी ट्री भनिने बिरुवा आजकल धेरै लोकप्रिय भइरहेको छ । यसको मूल अमेरिकामा छ र यसलाई मनी रूखको रूपमा चिनिन्छ । यो बोट चिनियाँ फेङ्गशुई र वास्तुमा धेरै विशेष मानिन्छ । आजकल यो सजिलैसँग केही चयन गरिएका नर्सरीहरू वा अनलाइनमा उपलब्ध हुन सक्छ। तपाईको घरमा रोपेर तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
वास्तवमा अश्वगन्धा बोटलाई एकदमै धनी मानिन्छ। घरमा अश्वगन्धाको रूख रोप्नाले सुख र समृद्धि आउँछ । यो औषधीको रूपमा पनि उपयोगी छ र यसका धेरै अन्य फाइदाहरू रहेका छन् । अश्वगन्धाका फूलहरूलाई पनि भगवानको पूजामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।श्वेटार्क दुधको बोट हो र यसलाई राम्रो भाग्यको सूचक पनि मानिन्छ ।
ख्याल गर्नुहोला कुनै सेतो पदार्थ निस्कने बिरुवा घरमा राख्नु हुँदैन । श्वेटार्क भनिने यो बोटलाई गणेशको प्रतीक मानिन्छ । यो उत्तम छ कि तपाईं यसलाई घरको सट्टा बार्दली वा बरान्डामा राख्नहोस् । यस कारणले गर्दा, घरमा सधैंका लागि शान्ति र खुशी रहन्छ ।
मुक्तिनाथ बाबाले सबैको रक्षा गरुन,माघ १३ गते बिहीबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मुक्तिनाथ बाबाले सबैको रक्षा गरुन,माघ ११ गते मंगलबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
श्री स्वस्थानी माताले सबैको रक्षा गरुन् ! श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (अष्टमो अध्याय) सुन्नुहोस
श्री स्वस्थानी माताले सबैको रक्षा गरुन् ! श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (सप्तम अध्याय) सुन्नुहोस
मुक्तिनाथ बाबाले सबैको रक्षा गरुन,माघ ०९ गते आइतबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
श्री स्वस्थानी माताले सबैको रक्षा गरुन् ! श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (षष्ठ्म अध्याय) सुन्नुहोस
मुक्तिनाथ बाबाले सबैको रक्षा गरुन,माघ ०८ गते शनिबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
श्री स्वस्थानी माताले सबैको रक्षा गरुन् ! श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (पञ्चम अध्याय) सुन्नुहोस र सेयर गर्नुहोस्
मुक्तिनाथ बाबाले सबैको रक्षा गरुन,माघ ०७ गते शुक्रबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
श्री स्वस्थानी माताले सबैको रक्षा गरुन् ! श्री स्वस्थानी ब्रत कथा (चतुर्थ अध्याय) सुन्नुहोस र सेयर गर्नुहोस्
© 2022 - Annapurna Daily. All Rights Reserved.